Erdogan oo sheegay in caalamku İsbaddali doono Korona Fayras 19 kadib - Tilmaan Media
Erdogan oo sheegay in caalamku İsbaddali doono Korona Fayras 19 kadib
Madaxwayne Jamhuuriyada Turkiga Rejab Dayib Erdogaan ayaa yidhi; Isbaddal ayaa ku soo wajjahan dunida Korona Fayras Kadib, wuxuuna sheegay in Turkiya ka gudbi doonto khattarta Korona Fayras, hadalka Erdogan ayaa ku yimid kulan maqal iyo muuqaal ah oo ay yeesheen madaxda dalalak ku bahoobay Ururka Golaha Turkida ee ay ku midaysan yihiin dalalka ku hadla Afka Turkiga.
Sidoo kale Erdogan wuxuu hoosta ka xariiqay in dalkiisa aysan dhibaato ka haysan agabka caafimaad ee loo baahan yahay si loo xakkameeyo xanuunka Korona Fayras19 oo fara kulul ku haya dhammaan dalalka caalamka. Dagaal ayaan kula jiraan cadaw aan la,arkin oo ay daba socdaan isbaddalo dhaqaale iyo bulsho oo baaxad wayn ayuu yidhi Erdogan.
Wuxuu madaxda usheegay sida ay muhiim utahay u diyaar garowga Korona Fayras 19 Kadib, iyada oo la,iska kaashanayo dhinacyada dhaqaalaha, caafimaadka iyo arimaha bulshada.
Erdogan wuxuu ku dheeraaday ka hadalka hormarka dalkiisu ka sameeyay dhanka caafimaadka iyo tallaabooyinka ay qaadday dawladdiisu si loola diriro Korona Fayras 19, isaga oo sheegay in ay sameeyeen gole aqoonyahan oo ka shaqayn doona ka hortagga iyo ladagaalanka Fayruusyada.
Golaha Turkida ayaa ah gole la sameeyay sanaddii 2009, waxaana xubna ka ah; dalalka Turkiga, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan iyo Uzbekistan.
Timaan Media (İstanbul)
Diblumaasiyadda Coronavirus: Sida uu Covid-19 usii hurinayo xiriirka Caalamiga ah
Puntland oo sheegtay inuusan dhaqan gelin amarkii ay ku xirtay xuduudaha Somaliland iyo Itoobiya ay la-wadaagto